Dr. Gees Oo Lafo-gur Ku Samaynaya Isbedelka Geeska Afrika Iyo Saamaynta Isbedelkaas Ee Somaliland
Thursday, 06 September 2018 13:54
Xagee ayuu ku dambayn doonaa is-beddelka iyo dabaylaha siyaasadeed ee ka dhacaya Geeska Afrika? Labadii sannadood ee u dambeeyey kacdoon dadweyne ayaa ka socday gobollada ay deggan yihiin beelaha Oromada iyo Amxaaradu
, labadaas qoomiyadood oo ah dadyawga ugu tiro badan beelaha kala duwan ee ku nool dalweynaha Itoobiya.
Dalka Eratariya ayaa u muuqda inuu ku guulaystay siyaasaddiisii mitidka ahayd oo isku tashigii iyo gaangistarnimadiisii uu kaga adkaaday wax-is-bidayaashii reer galbeedka (dalalka reer galbeedka) iyo ururradii ay samaysteen sida; UN, AU, IGAD ee masaakiinta loogu caga-jugleeyo, laguna cuno-qabateeyo. Waa taas madaxdii dalalka jaarka ee maagi jiray Eratariya ay haddakuyuuga ugu jiraan inay booqdaan caasimadda Asmara.
Dacawo ayaa iyada oo arooryo rooraysa la yidhi; "Dayo khayrka dhig.” Mid kale oo maqlayey baa yidhi; "Haddii ay khayr sidato may ku fadhido.” Hargaysa waxa joogaa oo cafis ku yimmi, tirana saddex ka noqday Ra’iisal-wasaare-ku-xigeeno xilal ka soo qabtay dowladaas Xamar. Xogtii u dambaysay ee laga soo saaray maamulkaas waxa uu caddaynayaa in dowladda Farmaajo ugu badnaan sannad dambe uun jirayso.
Allaah ha u naxariistee Axmed Ismaaciil Qaasim oo mar Ceerigaabo loo beddelay, ayey reer Ceerigaabo gabay ku boobeen soo dhaweyntiisa, si ay uga hadliyaan, kadibna waxa uu yidhi;"Waxan ahay nin dabin u galay, fuul ay coloobeen eh.
More in this category: « Waa maxay sababta ay reer galbeedku u doonayaan in ay burburiyaan Turkiga ka hor inta aan la gaarin sanadka 2023? Tacsi Marxuum Jaamac Nuur Xasan »